Iinkampani zokwakha Ukuthengisa kunye nokuhlawulwa ivuliwe Realtyww Info
Iinkampani zokwakha ngaphakathi Clifton
Iinkampani zokwakha ngaphakathi New Jersey
Iinkampani zokwakha ngaphakathi Concord
1 - 10 ka 21 Uluhlu
Ipapashwe ngu James Cobern
umbono Iinkampani zokwakha ipapashiwe 1 month ago
Ipapashwe ngu Designarc
umbono Iinkampani zokwakha ipapashiwe 4 months ago
Ipapashwe ngu alwarqasurvey
umbono Iinkampani zokwakha ipapashiwe 6 months ago
Ipapashwe ngu Stephen Reeves
umbono Iinkampani zokwakha ipapashiwe 8 months ago
umbono Iinkampani zokwakha ipapashiwe 11 months ago
umbono Iinkampani zokwakha ipapashiwe 1 year ago
Ulwakhiwo yinkqubo yokwakha isakhiwo okanye izakhiwo. Ulwakhiwo luyahlukahluka kwimveliso kuba ukwenziwa kwemveliso kubandakanya ukuveliswa kwezinto ezininzi ngaphandle komthengi okhethiweyo, ngelixa ulwakhiwo luhlala kwindawo yomthengi owaziwayo.  Ukwakha njengeshishini kubandakanya iipesenti ezintandathu ukuya kwezisithoba kwimveliso yangaphakathi yamazwe athuthukileyo.  Ulwakhiwo luqala ngokucwangciswa, [uyilo oludingekayo] uyilo, kunye nemali; kwaye iyaqhubeka de iprojekthi yakheke kwaye ilungele ukusetyenziswa. Ulwakhiwo olunobukhulu obukhulu lufuna ukusebenzisana kwimikhakha emininzi. Umyili oqhelekileyo ulawula umsebenzi, kwaye umphathi wolwakhiwo, injineli yoyilo, injineli yokwakha okanye umphathi weprojekthi uyayijonga. Ukwenza iprojekthi ngempumelelo, ucwangciso olululo luyimfuneko. Abo babandakanyekayo kuyilo nolwenziwo lwezibonelelo ezichaphazelekayo kufuneka baqwalasele iimfuno zommandla, impembelelo yemo engqongileyo yomsebenzi, ucwangciso oluyimpumelelo, uhlahlo-lwabiwo mali, ukhuseleko lwendawo, ukubakho kunye nokuhanjiswa kwezinto zokwakha, izinto zokusebenza, ukuphazamiseka kuluntu olubangelwe Ukulibaziseka kolwakhiwo kunye nokubhida, njl njl njl.